Barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee Radio Daljir oo xalay furmay, ayna ku baratameen afar dugsi sare. – Radio Daljir
Barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee Radio Daljir oo xalay furmay, ayna ku baratameen afar dugsi sare.
Bossaso, Aug, 03 – Waxaa xalay miiska Aqoonta ee radio Daljir ee Tartan iyo Tacliin ku baramay dugsiyada Nawaawi Bossaso iyo Muntadda Qardho oo ku wada jira (group A) tartamayna qaybta hore ee barnaamijka, halkaas oo labada dugsiba ay ku soo bandhigeen tartan aad u xirfadaysan.
Labada dugsi ee Nawaawi iyo Muntada midkasta waxaa la waydiiyey 6 su?aalood wuxuuna ka jawaabay 5 ka mid ah su?aalahaasi oo uu halkaas ku helay 10 buundo midkiiba, halka min hal su?aalna ay garan waayeen, mana jirin wax ka faa?iidaysi ah. Sidaasna waxay labada dugsi ku galeen bar-bar dhac taas oo micnaheedu yahay in dugsigiiba uu leeyahay 1 dhibic.
Sidoo kale waxaa qaybtii dambe ee barnaamijka ku tartamay dugsiyada sare ee Cumar Samatar Galkacyo iyo Sh. Xamdaan Bossaso oo ku wada jira (Group B) waxaana dugsi kasta la waydiiyey 6 su?aalood. Dugsiga Cumar Samatar Galkacyo ayaa ka jawaabay 6 ?dii su?aalood ee la waydiiyey wuxuuna halkaasi ku helay 12 buundo. Halka dugsiga Sh. Xamdaan Bossaso uu ka jawaabay 5 ka mid ah su?aalihii la waydiiyey uuna halkaasi ku helay 10 buundo. Waxaana guushu sidaasi ku raacday dugsiga Cumar Samatar Galkacyo. Dugsiga Cumar Samatar waxa uu leeheeyahay 3 dhibcood halka dugsiga Sh. Xamdaanna uusan wax dhibca lahayn.
Afarta dugsi ee xalay tartamay ayaa mid kasta waxa u haray 2 tartan oo kale inta lagu jiro wareegga koowaad barnaamijka.
Barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo sanad walba bisha Ramadaan la qabto ayaa waxaa iska kaashada Radio Daljir, Shirkadda Isgaarsiinta ee Golis iyo dallada waxbarashada alhiga ah ee Pen, waxaana sanadkaan barnaamijka ka qaadanaysa wasaaradda waxbarashada Puntland.